टेलिकमको ADSL र FTTHमा बबाल अफर ! | नेपाल आज
मङ्गलबार, १७ साउन २०७४ गते मा प्रकाशित
साउन २५ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु भएको सय वर्षे स्वर्णीम उत्सव नेपाल टेलिकमले अहिले मनाइरहेको छ । आधुनिक विश्वका उच्चतम् प्रविधि, प्रभावकारी सेवा र सेवामा पनि विविधता नेपाल टेलिकमको विषेशता नै हो ।
सरकारी स्वामित्व नेपाल टेलिकिमले हालै एडिएसएल सेवामा आकर्षक अफर सर्वाजनिक गरिरहेको छ । सबैभन्दा आकर्षक पक्ष त के भने १ एमविपिएस भन्दा कम स्पिडको एडिएसएल डाटाबाट इन्टरनेट चलाइरहेका ग्राहकहरुलाई नेपाल टेलिकमले स्वतः १ एमविपिएस स्पिडमा स्तरोन्नति गरिदिएको छ । अझै रोचक त पहिलेको भन्दा अब एडिएसएल सेवा सस्तो पनि हुनेछ ।
पहिले २५६ केविपिएस स्पिडको अनलिमिटेड एडिएसएलका लागि उपभोक्ताले नेपाल टेलिकमलाई १ हजार १७ रुपैयाँ तिर्नु पथ्र्यो । अब चार गुणा बढी स्पिडको इन्टरनेट नेपाल टेलिकमले मात्रै १ हजार रुपैयाँमा दिन थालेको छ ।
अर्कोतिर भोल्युम अर्थात आफूलाई आवश्यक पर्ने जति मात्रै डाटा लिन चाहनहरुका लागि पनि टेलिकिमले एडिएसएलमा अफर सार्वजनिक गरेको छ । ३ सय रुपैयाँमा १५ जिबी डाटा चलाउन पाइन्छ । यो भनेको ३ सय रुपैयामा १५ हजार ३६० एमबि डाटा हो । अर्थात दैनिक ५१२ एमवि डाटाका लागि उपभोक्ताले दैनिक १० रुपैयाँ तिर्दा हुन्छ । अब एक एमवि डाटालाई कति रुपैयाँ पर्यो होला त ? यसरी हिसाब निकाल्ने हो भने या ज्यादै नै सस्तो दर हुन आउँछ । किनभने यति सस्तो डाटा पाउनै गाह्रो छ । एक एमविलाई १ दशमलव ९५ पैशा पर्ने यस्तो आकर्षक अफर आजसम्म नेपालमा कहिले पनि कसैले ल्याउन सकेको छैन ।
भोल्युममा आधारित यस्ता प्याकेज खरिद गरेपछि ३० दिनमा खर्च गरिसक्नु पर्छ । यो सेवाको स्पिड एक एमविपिएस छ ।
नेपाल टेलिकमले २५ जिबीलाई ५ सय, ४० जिबीलाई ७ सयको अफर पनि ल्याएको छ । उपभोक्ताले जति बढी डाटा खरिद गर्छन् उति नै छुट पनि पाउँछन् । ४० जिबी डाटा किन्दा एक एमविको शुन्द दशमलव शुन्य १७ सात रुपैयाँ पर्छ । अब यति सस्तो र उच्च स्पिडको डाटा पाएपछि नकिन्ने को होला र ?
यो अफर घरमा ल्यान्डलाइन फोन भएका उपभोक्ताहरुका लागि हो । यस्तो सेवा लिन सुरुमा रजिष्ट्रेसन गर्नु पर्छ । भोल्युममा आधारित डाटा लिनेले ३ सय र अनलिमिटेड लिनेले २ सय दस्तुर तिर्नु पर्छ । तर यो दस्तुर एक पटक तिरेपछि हुन्छ ।
एफटिटिएच सेवामा पनि उस्तै छुट
एफटिटिएच फाइबर टु द होमको सेवा तपाईले लिनु भएको छ भने पनि नेपाल टेलिकमको अफरबाट लाभान्वित हुन सक्नु हुन्छ । २८ अक्टुबरसम्मका लागि दिइएको यो अफसरमा तीन महिनाको ५ हजार १६० रुपैयाँमा २४० जिबी डाटा पाइन्छ । छ महिनाको ९ हजार १२० रुपैयाँमा ५ सय जिबी र एक वर्षको अफर लिने हो भने १८ हजार २४० रुपैयाँमा १ हजार २ सय जिबी डाटा पाइन्छ ।
यो अफरको महशुल सुनेर तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर एफटिटिएच सेवा केही महंगो नै हुन्छ । किनभने यो सेवा सामान्य अरु सेवामा भन्दा स्पिड न्यूनत १० देखि १०० गुणासम्म बढी हुन्छ । माथिको अफर चाहि १० एमविपिएसको स्पिडको हो ।
तपाइलाई १ सय एमविपीएस स्पिड चाहिन्छ ? तपाइको कुनै कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय छ भने यस्तो सुविधा औधि प्रभावकारी हुन्छ । नेपाल टेलिकमलाई २३ हजार ४० रुपैयाँ तिरे पछि १२ सय जिबी डाटा १०० एमविपिएसको स्पिडमा चलाउन पाइन्छ । यो अफर घरेलु प्रयोजनका लागि भन्दा पनि व्यापारिक व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ ।